Madaxweyne Uhurru oo si kulul ugu hadlay afduubka dhadhaab loogu gaysto muwaadiniinta Kenya – Radio Daljir
Oktoobar 2, 2013 2:47 b 0
Nairobi, October 2, 2013 – Madaxweynaha Kenya Uhurru Kenyatta ayaa shaaciyey in aysan ciidanka Kenya marnaba ka noqon doonin go?aankii ay ku galeen Soomaaliya ee ay ugu biireen howl-galka nabbad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM.
Uhurru waxaa uu cadeeyey in aysan Kenya cabsi gelin doonin weerarada Argagixiso ee ka dhacaya gudaha dalkooda, arrintaas ayuu sheegay madaxweynuhu in tahay mid soo noq noqtay oo ay warbaahinta wadanka aad u hadal hayeen.
Wargayska The Stardard ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in dowladda Kenya ay tuhun balaaran ka qabto dadka Qaxootiga ah ee degan dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha Dhadhaab xili dhowaan xilibaan ka tirsan Baarlamanka uu sheegay in Al-shabaab ay dad ku tababaraan xeryaha.
?Soomaalida xeryaha Afduub ay u gaystaan muwaadiniinta Kenya iyo dadka ajinebiga ah, waxay moodayaan in ay xukuumadu gacmaha ka laabanayso howlaha wadaan? ayuu yiri madaxweyne Uhurru Kenyatta.
Madaxweyne Uhurru ayaa hadalo dhinaca amniga la xiriira oo Soomaalida aad loogu soo hadal qaaday ka sheegay kulan ka dhacay Nairobi, kaas oo loogu baroor-diiqayey dadkii ku dhintay weerarkii Westgate isla markaasna ay ka qayb galeen waddaada diimaha ee dalka Kenya